बैंक तथा वित्तिय संस्थाले किन टेरेनन् सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ? - सुनाखरी न्युज
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले किन टेरेनन् सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ?
Posted on: June 5, 2021 - 4:22 pm
बैंक तथा वित्तिय संस्थो सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता जनाउन अस्विकार गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले हालै एक विज्ञप्ति निकालेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने बतायो ।
कोषले मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेर कोषमा दर्ता हुन आग्रह गरेको थियो । तर वित्तीय क्षेत्रमा आबद्ध संघसंस्थाको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले हालको असहज अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुँदा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा पनि कटौती हुने उल्लेख गरेको छ । संघले कोषमा तत्कालका लागि आफूहरु सहभागि हुन बाध्य नभएको बताएको छ ।
सरकारले २०७६ साल साउन महिनादेखि देखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना ल्याएको थियो । तर अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै जटिल देखिएको छ ।
उता वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले यसबारेमा आधिकारिक धारण सार्बजनिक गरेको छैन । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले परिवारको समेत बीमा सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम व्यहोर्ने बजेटमा घोषणा गरेको छ । तर सोही व्यवस्थालाई आधार बनाएर कोषले मंगलबार बैंकर्स संघलाई पत्र मार्फत कोषमा दर्ता हुन आउन दवाव दिइसकेको छ । सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असारको योगदान सरकारले बेहोर्ने बताएपनि बैंकवित्तकै कर्मचारी अनिच्छुक हुनुले अन्य नीजि कम्पनीका कर्मचारी झन् सहभागि हुन नसक्ने प्रष्ट देखिन्छ ।